Volo mihintsy manapaka volo manapaka volom-bolo, mpanamboatra sy mpamatsy | Icool
Hetezo manety volo manapaka hety mihety volo
Modely ： IC-60G-2; IC-6030TG-2
● Ity hety ity dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 440C. Vonoina mora foana ny volo, milamina fa tsy mihetsika.
● Ny fanetezana mahitsy dia mety amin'ny fanamboarana mafy, ny volo lahy sy ny vavy lava volo ary fohy volo. Maranitra sy mateza ny akanjo. Ny lelany dia mamorona endrika miendrika sabatra, mahatonga ny hety ho voaravaka endrika kokoa.
● Ny nify maranitra miendrika V dia manana tendrony mazava tsara ary tsy hisintona ny volo. Ity paosin-nify ity dia mety amin'ny volo manify ary afaka mifehy mora foana ny habetsaky ny fanesorana volo. Misokatra sy mikatona voajanahary ary manapaka maranitra. Gunting tena tsara natao ho an'ny stylist.
● Ny visy dia mandray voanjo azo ovaina tanana, izay mety amin'ny fanitsiana ny fihenan'ny hety. Ny visy dia manana fametrahana mazava tsara ary mitazona ny malama sy ny fitoniana amin'ny hetsiky ny hety.
● Ny teknolojia dia manana teknolojia famolavolana endriny dragona miavaka, ary ny fisehoany dia lamaody sy manjakazaka. Mandritra izany fotoana izany dia mifanaraka amin'ny knuckles amin'ny rantsantanana ny tahony, ka tsy ho reraka izy aorian'ny fotoana lava. Miaraka amin'ny peratra rantsan-tànana silipo malefaka dia azo ampiasaina malalaka izy io na inona na inona ny hatevin'ny rantsantanana, ary mahazo aina sy mahazo aina ny tanana.
Tanana vita sokitra misy mizana dragona
Teo aloha: Hety mihety volo vita amin'ny volom-bolo vita amin'ny volamena
Manaraka: Ny hety volo dia manamboatra tadim-bolo manify